Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် ကျောင်းဟောင်းစက်ဘီးဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ကျောင်းဟောင်းစက်ဘီးဘဲလ် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. သည် Taiwan တွင် ကျောင်းဟောင်းစက်ဘီးဘဲလ် ကိုဒီဇိုင်းထုတ်၊ ထုတ်လုပ်၊ ထုတ်လုပ်ရာတွင်အဓိကအထူးပြုသည်။ ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးသည်နာမည်ကောင်းနှင့်ကျော်ကြားပြီးယခုအခါကုမ္ပဏီသည် ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများစွာအတွက်မူရင်းထုတ်လုပ်သူလည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ်မှတ်: အမြန်ဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များထောက်ပံ့ရေး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သောနည်းပညာ၊ သစ္စာ ၀ န်ဆောင်မှု၊ အရည်အသွေးပြည့်စုံသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်အပြောင်းလွယ်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်သောစနစ်တို့ဖြင့် ၀ ယ်သူ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပါ။
။ ကျနော်တို့အနာဂတ်စိန်ခေါ်မှုများကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားဖြည့်ဆည်းကျွန်တော်တို့၏နည်းပညာ, စီမံခန့်ခွဲမှု, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်ဆန်းသစ်တီထွင်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
ပုံစံ - JH-230/JH-240
ပစ္စည်း:သံမဏိ sliver အပေါ်ဆုံးနှင့် UCP အခြေစိုက်စခန်း.
ထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10pc/box 200pc/ctn.,1.၆ ပေ.
ဆး.ဒဗလျူ.:၁၈ ကီလို G.ဒဗလျူ.:ကီလို ၂၀
ငွေရောင်လှတယ်-chrome finish သည်သင်၏စက်ဘီးကိုစတိုင်ကျစေသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/old-school-bike-bell.html
ကျောင်းဟောင်းစက်ဘီးဘဲလ် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ ကျောင်းဟောင်းစက်ဘီးဘဲလ် ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ ကျောင်းဟောင်းစက်ဘီးဘဲလ် ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan
ပစ္စည်း:သံမဏိ sliver အပေါ်ဆုံးနှင့် UCP အခြေစိုက်စခန်း.အရွယ်အစား:၆၀ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10pc/box 200pc/ctn.,1.၆ ပေ.ဆး.ဒဗလျူ.:၁၈ ကီလို G.ဒဗလျူ.:ကီလို ၂၀ ခေါင်းလောင်း၏ဂန္ဓ ၀ င်သံကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကနားလည်ပြီးအသက်အရွယ်မရွေးလူတိုင်းအလွယ်တကူနားလည်နိုင်သည် ငွေရောင်လှတယ်-chrome finish သည်သင်၏စက်ဘီးကိုစတိုင်ကျစေသည်. Lever သည်ထိတွေ့ရန်လွယ်ကူသည်,ခေါင်းလောင်းသည်အနည်းဆုံးအားစိုက်မှုဖြင့်လေးနက်သောအသံကိုဖန်တီးသည် အသံကြည်လင်ပြတ်သားသည်:သတ္ထုစက်ဘီးလက်စွပ်ဘဲလ်သံသည်သင်စီးနင်းသည့်အခါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာကြားနိုင်ရန်ကျယ်လောင်ပြီးရှင်းလင်းသောအသံကိုဖန်တီးနိုင်သည်,မင်းရဲ့စီးနင်းမှုကပိုလုံခြုံလိမ့်မယ်
ပစ္စည်း:ထိပ်တန်း-သံမဏိ,အခြေခံပလပ်စတစ်.အရွယ်အစား:၅၇ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10 PCS/သတျတော.200 PCS/CTN.၂.၂ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:၁၄ ကီလိုဂရမ်ဂျီ.ဒဗလျူ.:၁၆ ကီလိုဂရမ် တောက်ပ&အဖုံးသန့်ရှင်းပါ–ဂန္ထဝင်&ဒီဇိုင်းလှတယ်,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည် ၀ ယ်သူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည် အသံမြည်သည်&ရှင်းလင်းသော-ရှင်းလင်းပြီးကျယ်လောင်သောဖုန်းမြည်သံသည်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလျင်မြန်စွာသတိပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုပေးနိုင်သည်.လက်ရာမြောက်သော&တာရှည်ခံသည်-ဂန္ထဝင်လူမီနီယံခေါင်းလောင်း၏မျက်နှာပြင်ကိုသံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၎င်းကိုတာရှည်ခံ။ လှပစေသည် အသုံးပြုနိုင်သောစက်ဘီးအမျိုးအစားများ-လက်ကိုင်အချင်း ၂၂ ရှိစက်ဘီးအများစုအတွက်သင့်တော်သည်.၂ မီလီမီတာ,စက်ဘီးအမျိုးအစားအများစုအတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်,စကူတာများ,သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ,စသည်တို့. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ,အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်ဝက်အူလှည့်တစ်ခုသာလိုသည်.ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင်,ကျေးဇူးပြုပြီးမနေပါနဲ့’ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်
ပစ္စည်း:ED ထိပ်နှင့် ED အခြေခံသံမဏိစာရွက်.အရွယ်အစား:၅၈ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10pc/box 200pc/ctn.,1.၆ ပေ.ဆး.ဒဗလျူ.:၁၈ ကီလို G.ဒဗလျူ.:ကီလို ၂၀ ခေါင်းလောင်း၏ဂန္ဓ ၀ င်သံကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကနားလည်ပြီးအသက်အရွယ်မရွေးလူတိုင်းအလွယ်တကူနားလည်နိုင်သည် လှပသောအနက်ရောင် finish သည်သင်၏စက်ဘီးကိုစတိုင်ကျစေသည်. Lever သည်ထိတွေ့ရန်လွယ်ကူသည်,ခေါင်းလောင်းသည်အနည်းဆုံးအားစိုက်မှုဖြင့်လေးနက်သောအသံကိုဖန်တီးသည် အသံကြည်လင်ပြတ်သားသည်:သတ္ထုစက်ဘီးလက်စွပ်ဘဲလ်သံသည်သင်စီးနင်းသည့်အခါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာကြားနိုင်ရန်ကျယ်လောင်ပြီးရှင်းလင်းသောအသံကိုဖန်တီးနိုင်သည်,မင်းရဲ့စီးနင်းမှုကပိုလုံခြုံလိမ့်မယ်